လယျယာမွကေို အရပျစာခြုပျဖွငျ့ ဝယျယူထားသူမြားသညျ တရားဝငျပါသလား? - Property Knowledge in Myanmar | iMyanmarHouse.com
လယျယာမွကေို အရပျစာခြုပျဖွငျ့ ဝယျယူထားသူမြားသညျ တရားဝငျပါသလား?
18 Oct 2020 2:02 pm တွင် တင်ခဲ့သည်
392 ကြိမ် ကြည့်ရှု့ ပြီး
၂၀၁၂ ခုနှဈ၊ လယျယာမွဥေပဒအေရ လယျယာမွလေုပျပိုငျခှငျ့ကို ရောငျးခခြှငျ့၊ လဲလှယျခှငျ့၊ ပေါငျနှံခှငျ့၊ လှဲပွောငျးခွငျး ပွုလုပျလြှငျ ကြေးရှာလယျယာမွဦေးစီးဌာနရှမှေ့ောကျတှငျ လကျမှတျရေးထိုးခြုပျဆိုပွီး မှတျပုံတငျမှသာ တရားဝငျအရောငျးအဝယျဖွဈမညျဖွဈပါသညျ။
သို့သျော ထိုသို့ပွုလုပျရနျအတှကျ လယျယာမွကေို ကာလတနျဖိုးသတျမှတျရနျအတှကျ မညျသူကိုအာဏာလှဲအပျကွောငျး ထုတျပွနျထားခွငျး၊ တရားဝငျအာဏာပေးအပျထားခွငျးမရှိသေးသဖွငျ့ မှတျပုံတငျစာခြုပျခြုပျဆိုနိုငျခွငျးမရှိသေးဘဲ အရပျစာခြုပျဖွငျ့သာ အရောငျးအဝယျပွုလုပျခဲ့ကွပါတယျ။
သို့သျော ၂၀၁၉ ခုနှဈ၊ မလေတှငျ ဗဟိုလယျယာမွစေီမံခနျ့ခှဲရေးမှုအဖှဲ့၏ ညှနျကွားခကျြအမှတျ (၂/၂၀၁၉) အရ မွို့နယျလယျယာမွစေီမံခနျ့ခှဲ့မှုအဖှဲ့အား ခနျ့အပျတာဝနျပေးအပျလိုကျပွီး ရပျကှကျ/ကြေးရှာ အုပျစုလယျယာမွစေီမံခနျ့ခှဲမှုအဖှဲ့က အဆိုပွုတငျပွလာသော တဈဧကနှုနျးထားအား မွို့နယျလယျယာမွေ စီမံခနျ့ခှဲမှုအဖှဲ့မှ စိစဈဆောငျရှကျသှားရနျ ညှနျကွားထားပါသညျ။ထို့အတှကျကွောငျ့ အဆိုပါညှနျကွားခကျြ ထှကျပွီးသညျ့အခြိနျမှစတငျ၍ ရောငျးခခြှငျ့၊ လဲလှယျခှငျ့၊ ပေါငျနှံခှငျ့၊ လှဲပွောငျးခွငျးတို့ကို တရားဝငျမှတျပုံတငျ စာခြုပျခြုပျဆိုဆောငျရှကျနိုငျပွီဖွဈပါသညျ။
ထိုအခါ စကားပွောစရာရှိလာတာက ၎င်းငျးညှနျကွားခကျြမထှကျခငျ အရပျစာခြုပျဖွငျ့ ဝယျယူထားသညျ့ လယျယာမွမြေားသညျ တရားမဝငျဘူးလားဆိုတာပါဘဲ။ ဥပဒအေရ ပွောရမညျဆိုလြှငျတော့ အရပျစာခြုပျဖွငျ့ဝယျယူထားတာ တရားမဝငျပါဘူး ဥပဒကေိုခြိုးဖောကျရကပြါတယျ။
သို့သျောပွညျသူက မှတျပုံတငျစာခြုပျခြုပျဆိုလို့ရလကျြနှငျ့ ဥပဒကေို ခြိုးဖောကျတာမဟုတျဘဲ အစိုးရမှမှတျပုံတငျစာခြုပျခြုပျဆိုရနျ ဆောငျရှကျပေးနိုငျခွငျးမရှိသောကွောငျ့ ဖွဈတယျ။ ထိုအတှကျကွောငျ့ ယခငျကအရပျစာခြုပျဖွငျ့ ဝယျယူထားသောလယျယာမွမြေားသညျ အစိုးရ၏ မညျသို့ ကုစားဆောငျရှကျပေးမညျကို စောငျ့ဆိုငျးရနျသာရှိပါသညျ။
လယ်ယာမြေကို အရပ်စာချုပ်ဖြင့် ၀ယ်ယူထားသူများသည် တရားဝင်ပါသလား?
၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ လယ်ယာမြေဥပဒေအရ လယ်ယာမြေလုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ရောင်းချခွင့်၊ လဲလှယ်ခွင့်၊ ပေါင်နှံခွင့်၊ လွှဲပြောင်းခြင်း ပြုလုပ်လျှင် ကျေးရွာလယ်ယာမြေဦးစီးဌာနရှေ့မှောက်တွင် လက်မှတ်ရေးထိုးချုပ်ဆိုပြီး မှတ်ပုံတင်မှသာ တရားဝင်အရောင်းအ၀ယ်ဖြစ်မည်ဖြစ်ပါသည်။
သို့သော် ထိုသို့ပြုလုပ်ရန်အတွက် လယ်ယာမြေကို ကာလတန်ဖိုးသတ်မှတ်ရန်အတွက် မည်သူကိုအာဏာလွှဲအပ်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ထားခြင်း၊ တရားဝင်အာဏာပေးအပ်ထားခြင်းမရှိသေးသဖြင့် မှတ်ပုံတင်စာချုပ်ချုပ်ဆိုနိုင်ခြင်းမရှိသေးဘဲ အရပ်စာချုပ်ဖြင့်သာ အရောင်းအ၀ယ်ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။
သို့သော် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ မေလတွင် ဗဟိုလယ်ယာမြေစီမံခန့်ခွဲရေးမှုအဖွဲ့၏ ညွှန်ကြားချက်အမှတ် (၂/၂၀၁၉) အရ မြို့နယ်လယ်ယာမြေစီမံခန့်ခွဲ့မှုအဖွဲ့အား ခန့်အပ်တာဝန်ပေးအပ်လိုက်ပြီး ရပ်ကွက်/ကျေးရွာ အုပ်စုလယ်ယာမြေစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့က အဆိုပြုတင်ပြလာသော တစ်ဧကနှုန်းထားအား မြို့နယ်လယ်ယာမြေ စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့မှ စိစစ်ဆောင်ရွက်သွားရန် ညွှန်ကြားထားပါသည်။ထို့အတွက်ကြောင့် အဆိုပါညွှန်ကြားချက် ထွက်ပြီးသည့်အချိန်မှစတင်၍ ရောင်းချခွင့်၊ လဲလှယ်ခွင့်၊ ပေါင်နှံခွင့်၊ လွှဲပြောင်းခြင်းတို့ကို တရားဝင်မှတ်ပုံတင် စာချုပ်ချုပ်ဆိုဆောင်ရွက်နိုင်ပြီဖြစ်ပါသည်။
ထိုအခါ စကားပြောစရာရှိလာတာက ၎င်းညွှန်ကြားချက်မထွက်ခင် အရပ်စာချုပ်ဖြင့် ၀ယ်ယူထားသည့် လယ်ယာမြေများသည် တရားမ၀င်ဘူးလားဆိုတာပါဘဲ။ ဥပဒေအရ ပြောရမည်ဆိုလျှင်တော့ အရပ်စာချုပ်ဖြင့်ဝယ်ယူထားတာ တရားမ၀င်ပါဘူး ဥပဒေကိုချိုးဖောက်ရကျပါတယ်။
သို့သော်ပြည်သူက မှတ်ပုံတင်စာချုပ်ချုပ်ဆိုလို့ရလျက်နှင့် ဥပဒေကို ချိုးဖောက်တာမဟုတ်ဘဲ အစိုးရမှမှတ်ပုံတင်စာချုပ်ချုပ်ဆိုရန် ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိသောကြောင့် ဖြစ်တယ်။ ထိုအတွက်ကြောင့် ယခင်ကအရပ်စာချုပ်ဖြင့် ၀ယ်ယူထားသောလယ်ယာမြေများသည် အစိုးရ၏ မည်သို့ ကုစားဆောင်ရွက်ပေးမည်ကို စောင့်ဆိုင်းရန်သာရှိပါသည်။
စာချုပ် အရောင်းအဝယ် ဗဟုသုတ သိမှတ်ဖွယ်ရာ
အိမျအောကျထပျ၌ ဘုရားခနျး ထားသငျ့ မထားသငျ့
ဆီးခြိုသမားတှအေတှကျ သငျ့တျောတဲ့ ခရမျးရောငျပွောငျး
သကျတမျးကုနျနသေညျ့ ဂရနျမွကေို အမှဆေကျခံပိုငျခှငျ့ရှိသလားဆိုလြှငျ
ကနျြးမာရေးနှငျ့အလှအပအတှကျ ပနျးသီးစိမျး၏ အံ့ဖှယျအကြိုးကြေးဇူး (၅) ခု
တဈယောကျတညျး အိမျမှာနတေဲ့အခါ လုံခွုံမှုရှိစဖေို့
အိမျရဲ့ ကွမျးပွငျနဲ့ နံရံတှမှောရှိတဲ့ မှိုနဲ့ ရညှေိတှကေို အပွီးသတျဖယျရှားနညျး (၃)နညျး
လူတဈကျို စိတျတဈမြိုး ဂရနျမွရေောငျးသူ အမြိုးမြိုး
မြစ်ကြီးနား | ကချင်ပြည်နယ်
New House for Sale (11' x 20')2Storey RC Building at Bogyoke Village, Kyaung Street, Thanlyin Township
565 သိန်း (ကျပ်)
ပေအကျယ် (13x48) တိုက်ခန်း
ပေ (16’ x 40’) အကယျြ တိုကျခနျး လှိုငျ (၁) ရပကှကျတှငျ...
Royal Thiri Condo
P/R 213 တောငျဥက်ကလာ တိုကျခနျးငှားရနျရှိပါသညျ။